Qaramada Midoobey oo ku baaqday Puntland iyo Jubbaland in ay taggaan Shirka Dhuusamareeb | SMC
Home WARARKA MAANTA Qaramada Midoobey oo ku baaqday Puntland iyo Jubbaland in ay taggaan Shirka...
Qaramada Midoobey oo ku baaqday Puntland iyo Jubbaland in ay taggaan Shirka Dhuusamareeb
Qaramada Midoobey ayaa ugu baaqday maamulada Puntland iyo Jubbaland in ay ka qeyb galaan Shirka Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada Galmudug.
Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey James swan ayaa sheegay in uu ka xun yahay ka maqnaanshaha labada maamul ee Shirka Dhuusamareeb.
“Sidaasi darteed, waxaan ka xunnahay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Madaxweynaha Jubaland Axmed Islaam Madoobe ka maqnaashahooda kulankan muhiimka ah. Waa wax laga xumaado in ay diideen ka qeybgalka shirkan iyadoo loo jeediyay codsiyo badan oo ka imaanaya Hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliyeed iyo bah wadaagta caalamka.
Khudbad uu jeediyay Qaramada Midoobey ayuu mar kale ku celiyay in loo baahan yahay in Shirka Dhuusamareeb laga soo saaro go’aan Mideysan.
“Waan ognahay in aragtiyo kala fog ay kala haystaan hoggaamiyeyaasha iyo in xiisadda siyaasadeed ay kacsan tahay mar walba doorashada kahor. Haddana, waa xilliyada ay lama huraanka tahay in madaxda dalka ay wada hadlaan, soona bandhigaan aragtiyadooda ugu wanaagsan si loo gaaro xalal dan u ah shacabka Soomaaliyeed”
Previous articleDhageyso Warbixin Ku Saabsan Xuska Maalinta Dhalinyarada Aduunka ee 12 August
Next article(Deg Deg) Farmaajo & kooxdiisa oo Dhuusamareeb ka soo saartay nooc doorasho
Fahad Yaasiin oo laga dalbaday inuu is casilo